I-Puppy Weight Calculator: Ingakanani I-Puppy Yami Ezoba Nkulu Kangakanani? - Okufakiwe
Ngomunye wemibuzo ebuzwa kakhulu odokotela bezilwane, abaqeqeshi kanye nabafuyi ... 'Umdlwane wami uzoba mkhulu kangakanani ?!'
Abanye abantu bazokutshela ukuthi ubuke usayizi wezidladla zabo, noma kunjalo, indlela engcono ukusebenzisa umshini wokubala wesisindo se-puppy ( gxumela kwisibali sethu ).
Ukwazi uhlobo lwakho kwesinye isikhathi kungenza kube lula ukuqagela usayizi wabantu abadala, kodwa-ke, lokhu kuya kuba nzima ngokuxuba-izinhlobo, yingakho kungcono ukusebenzisa umshini wokubala isisindo semidlwane ukukunikeza umbono ongcono!
Ukulinganisa ngokunembile isisindo somdlwane wakho kubalulekile kubalulekile uma kukhulunywa ngokuthi kungakanani ukondla umdlwane ngokuya ngesisindo sawo, ukuzivocavoca umzimba, nokuhlela izidingo zekhreyithi noma zesikhala.
Puppy Isisindo Calculator
Bala Isisindo Sabantu Abadala Bomdlwane Wakho
Kunezindlela ezithile ezingabikezelwa zokuthola isisindo somuntu omdala esilinganiselwe se-puppy yakho, ngokuqala ngesibali sesisindo se-puppy:
Khetha iminyaka yobudlwane bakho:
–Iminyaka (amasonto) - amasonto amabili ubudala amasonto ama-3 amasonto ama-4 amasonto ama-5 ubudala amasonto ama-6 ubudala amasonto ama-7 ubudala amasonto ayi-8 ubudala amasonto ayi-10 ubudala amasonto ayi-10 amasonto ayi-11 ubudala amasonto ayi-12 ubudala amasonto ayi-13 ubudala amasonto ayi-14 ubudala amasonto ayi-16 amasonto ayi-17 amasonto aneminyaka engu-18 amasonto angu-20 ubudala amasonto amadala2424 amasonto amadala25 amasonto amadala amasonto angama-27 amasonto angama-28 amasonto angama-29 ubudala amasonto angama-30 ubudala amasonto angama-31 ubudala amasonto angama-32 ubudala amasonto angama-34 ubudala amasonto angama-34 ubudala amasonto angama-35 ubudala amasonto angama-36 ubudala amasonto angama-37 ubudala amasonto angama-38 ubudala amasonto angama-40 ubudala amasonto angama-41 amasonto angama-42 ubudala amasonto angama-43 ubudala amasonto angama-44 ubudala amasonto angama-44 ubudala amasonto angama-47 amasonto angama-47 amasonto angama-49 amadala anamasonto angama-50 ubudalaamasonto angama-51 ubudala anamasonto angama-52 ubudala
Khetha isisindo somdlwane wakho:
–Weight (lb) –1 lb2 lb3 lb4 lb5 lb6 lb7 lb8 lb9 lb10 lb11 lb12 lb13 lb14 lb15 lb16 lb17 lb18 lb19 lb19 lb20 lb22 lb23 lb24 lb25 lb26 lb lb lb lb23 lb40 lb40 lb40 lb40 lb40 lb40 lb40 lb29 lb45 lb46 lb47 lb48 lb49 lb50 lb51 lb52 lb53 lb54 lb55 lb56 lb57 lb58 lb59 lb60 lb61 lb62 lb63 lb64 lb65 lb66 lb67 lb68 lb69 lb70 lb71 lb72 lb73 lb74 lb75 lb76 lb77 lb78 lb79 lb80 lb81 lb82 lb83 lb84 lb85 lb86 lb87 lb88 lb89 lb90 lb91 lb92 lb93 lb94 lb95 lb96 lb97 lb98 lb99 lb100 lb101 lb102 lb103 lb104 lb105 lb106 lb107 lb108 lb109 lb110 lb111 lb112 lb113 lb114 lb115 lb116 lb117 lb11 ozb oz
Faka iminyaka nesisindo somdlwane wakho.
Umdlwane wakhoizokala phakathi18lb futhi18lbuma sezikhulile ngokuphelele.
Izindlela Ezi-7 Zokuqonda Ukuthi I-Puppy Yakho Izothola Kangakanani
Kunezici eziningana ezingaba nomthelela ekutheni i-puppy yakho izobe inkulu kangakanani.
7. Qala Nabazali Babo
Leli yithuba lakho elihle kakhulu lokuthola ukuthi umdlwane wakho uzokuthola ubukhulu kangakanani, ikakhulukazi uma bewuhlobo oluxubekile.
Uma u ube nomdlwane waseGerman Shepherd , uzokwazi kusuka ezingeni labo lokuzala, uma selikhulile ngokuphelele lisukela kumakhilogremu angama-48 kuye kwangama-90 ngesisindo.
Kepha, uma wazi ukuthi umama unesisindo esingamakhilogremu angama-50, nobaba ongu-65 amakhilogremu, maningi amathuba okuthi ube noMalusi omncane waseJalimane cishe ku-60lb.
6. Usayizi We-Litter Imithelela Usayizi We-Puppy
Imidlwane emincane ijwayele ukuqhamuka kudoti omkhulu.
Ngakho-ke umdlwane wakho unabafowethu abangaki abanethonya lokuthi umdlwane ukhula kangakanani empilweni yabo.
Ubukhulu bezinsalela buyahlukahluka kuye ngohlobo oluthile , kepha ukukhomba izitayela zodoti eziqondene nomdlwane wakho owukhethile kungakusiza uqonde ukuthi umdlwane wakho ungathola kangakanani.
5. Ngabe Abesilisa Noma Abesifazane?
Umthetho ojwayelekile uthi, ngenxa ye-dimorphism yezocansi , abesifazane bancane kunabesilisa.
Uma ukhetha umdlwane omncane, owesifazane angahle abe ngcono.
Isibonelo, owesifazane ILabradors ivame ukuba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-55-70 kanti abesilisa banesisindo esikhudlwana esiphakathi kwamakhilogremu angama-65-80.
I-Genetics inengxenye enkulu engayidlala ekulinganiseni isisindo somdlwane omdala , kepha imvelo nayo izokuthinta.
Ukuzivocavoca ngokweqile kungadala ukulimala nokulimala kuwo womabili amathambo nemisipha yomdlwane wakho, ozodinga ukuphumula.
Lokhu akulungile kumdlwane osathuthuka ngoba ukuzivocavoca indlela imidlwane ekhulisa ngayo ukuqina kwamathambo ayo.
3. Ukudla okunomsoco!
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekukhuleni komdlwane wakho umsoco.
Lokhu kuqala kusukela ngosuku abazalwa ngalo.
Ubisi lukaMama wabo lwakhiwe ngamaprotheni namafutha okubalulekile ekukhuleni nasekuthuthukiseni imidlwane esanda kuzalwa; ukuntuleka kobisi kungavimba ukukhula kwazo kakhulu .
Ngesikhathi sokulunyulwa, imidlwane kufanele ikwazi ukuthola ukudla okusezingeni, kubalulekile ukuhlangabezana nezidingo zayo zokudla okunempilo.
Uma ufuna ukuthi i-pup yakho ikhule ngamandla ayo onke, khona-ke ukudla okuyikhwalithi, ngoba isigaba sabo sempilo kubalulekile!
2. Uhlobo Lokuzala
Lapho inja yakho ifinyelela usayizi wayo ogcwele kuzoya ngokuthi iziphi izinhlobo.
Imidlwane yokuzala emaphakathi, enkulu futhi emikhulu ingathatha noma yikuphi phakathi kwezinyanga eziyi-12-24 ukukhula ngokugcwele .
Izinhlobo ezincane nezamathoyizi zikhule ngokugcwele ezinyangeni eziyi-12.
Ngokuvamile kucatshangwa ukuthi ezinhlotsheni ezincane inzuzo engu-5oz ngesonto iyamukeleka futhi yohlobo olukhulu oluzungeze u-2lb ngesonto.
1. Desexing Inja
Uma ukhetha ukukhipha inja yakho, kuzoba nomthelela ukuthi umdlwane wakho uzokhula kangakanani.
Kucatshangwa ukuthi ngokususwa kwamahomoni, amathambo awutholi umyalezo awudingayo ukuze ayeke ukukhula, ngakho-ke imidlwane ingakhula ibe nde.
Okukhathazayo-ke umthelela wokuthi amalunga aqondane kanjani nokuthuthuka okulandelayo kwezicubu zamathambo; ukuxoshwa kufanele njalo kubhekwe ngamacala ngamacala ekuxoxweni nodokotela wakho wezilwane.
Iqiniso, umdlwane wakho umdlwane.
Ukunikeza ukuthi uyahlangana izidingo zabo zansuku zonke zokudla okunempilo , zizokhula.
Khumbula nje, izinhlobo ezahlukahlukene zemidlwane zizokhula ngejubane elihlukile kuzo zonke izigaba zokukhula ezahlukene.
Iya kokuhlolwa njalo nodokotela wezilwane bese usho noma yikuphi ukukhathazeka mayelana nokukhula kwazo uma kungavela, ungaqhubeka nokusebenzisa wokubala isisindo sethu se-puppy ukuqapha ukukhula kwabo ngokuhamba kwesikhathi!
Ama-Bordoodles izinja ezinhle, kepha ingabe ngumdlalo ofanele wena?
Thola ukuthi kungani amaBoxerdoodles enothando futhi eqotho
impisi uhhafu uhhafu german Shepard
uhhafu yorkie uhhafu shih tzu imidlwane
impumulo ebomvu american pitbull terriers
izinhlobo ezahlukahlukene zezinja ze-pitbull
abelusi baseJalimane bangena ngamiphi imibala